Warsaw umsakazo insika Akukhona nje okuxhunyanwa kudivayisi, futhi wayeneminyaka engaba ngu-17 isakhiwo ezinde kakhulu emhlabeni. Kwaba umklamo izishaya isifuba kokuphelele kwezintathu yePoland. Ngeshwa, kungekho lutho oluhlala phakade, kodwa ekwindla yalesi sakhiwo wayengumJuda ukumangala wonke umuntu. Kungani Warsaw umsakazo insika ziwile, njengoba yakhiwa futhi eziqhutshwa? Ake ukuthola izimpendulo zale mibuzo.
Ukwakhiwa umbhoshongo umsakazo omusha kwenziwe umsakazo Polish ungase uqiniseke okusakaza on ensimini yase-Poland nakwamanye amazwe aseYurophu. Ukuze kuzuzwe ukusebenza elikhulu kudingeka ukwakha kokubili design ephakeme kungenzeka. Lamanje main yezokusakaza umbhoshongo ePoland, eduze Warsaw, waba ukuphakama 335 m. Kwakudingekile ukwakha isakhiwo kakhulu kunalokhu.
izinhlelo Ukwakhiwa achazwayo wezakhiwo owaziwa-Jan Polak. Ngokusho lokhu ukwakhiwa okwaba yiso ukuthi ukuphakama 646,4 m, okuyinto cishe izikhathi ezimbili ephakeme kunaleyo esiteshini ekhona kuze kube yileso sikhathi. Warsaw umsakazo insika kufanele zitholakale eduze nedolobhana uConstantine Plock County Mazowieckie voivodship, e km 84 kuya entshonalanga yenhloko-dolobha.
Isakhiwo Warsaw umsakazo insika waqala ngoJanuwari 1970. Ukwakhiwa, eyayiholwa unjiniyela Andrzej Shepchinsky iqhaza abasebenzi ikakhulukazi Polish inkampani "Mostostal" nezinye izinhlangano zendawo. Kodwa kuyacaca ukuthi amaningi ukwakhiwa - omoya in inani izingcezu ezimbili - eyakhelwe inkampani Swiss Brown, Boveri & Cie. Ukwakhiwa ikheshi wasebenza enkampanini Swedish Alimak.
Ekugcineni, ngo-May 18, 1974, ngemva kweminyaka engaphezu kwengu emine yokusebenza, ukwakhiwa yomsakazo seliqediwe, futhi ngo-June 22, ke wafakwa msebenzi.
Manje ake sibheke izici eziyinhloko yomsebenzi Warsaw umsakazo insika. Ngakho, liyini umklamo?
Warsaw umsakazo insika Ukuphakama kwawo bekuziikubhite 646,4 m. Lokhu kwenza kube ngaleso sikhathi aphakeme izakhiwo njalo ekhona emhlabeni. Ingqikithi yesisindo sezinto isakhiwo zazilingana 420 m. Isakhiwo base nesigaba walo wawenziwe ngefomu unxantathu kabani izinhlangothi ayalingana 4.8 m. Caracas isakhiwo uyayenza ensimbi ipayipi nge ububanzi 24,5 cm.
Isakhiwo ayisona ukwakhiwa eyodwa ngezitho kanye ehlanganisa izingxenye 86 isakhiwo. Ingxenye ngayinye kwakumelwe ukuphakama 7.5 m. The ukuzinza enikeziwe backstay ezintathu isehlane ngesimo izintambo steel nge ububanzi 5 cm ngalinye. Ingqikithi yesisindo sezinto lezi besokunxele kwaba 80,000 kg.
Ngaphezu kwalokho, isakhiwo kwadingeka lift ukuthi iye ngokukhethekile oluqanjwe inkampani Swedish Alimak. Wakha ijubane 21 m / imiz. Ukuze avuke ngezansi ukuze izikhungo zayo phezulu, kudingeka ukuchitha cishe isigamu sehora. Nokho, uma ufisa ungase wenze yokutakula futhi isitebhisi ezivamile.
Substations ukuthi kwaku okuxhunyanwa ingxenye sakhiwo 600 metres kusukela embhoshongweni omsakazo isakhiwo avaliwe, eyayintula ivolumu ayizinkulungwane 17. Cu. M. Kulapha kwaku inhliziyo isakhiwo sonke - omoya ezimbili, oluqanjwe Switzerland at Brown, Boveri & Cie. Ngamunye wabo sinesikhundla 1 MW. Ukuze ukuvumelanisa kakhulu ngokunembile amaza we omoya amabili asetshenziswa kuma-atomic clock.
Ukuze uthole amandla omoya, amandla ukusetshenziswa kwawo kwakuyizingalo 6 MW, ehlukile amandla plant lamiswao.
Ukusebenza umsakazo insika
Warsaw umsakazo insika lalimisa okuthiwa "Broadcasting Centre Konstantinov." Yaklanyelwa yokudlulisela umsakazo olude. Nge lo msebenzi ngayo ukubhekana ngokuphumelelayo engaphezu kwengu-17. isignali yakhe ihlanganisa hhayi kuphela insimu yase-Poland, kodwa futhi kulo lonke elaseYurophu. Polish Radio ungalalela ngisho eNyakatho Afrika nase-Nyakatfo Melika.
Ohlukile umklamo kwaba ukuthi lokhu kwaba nengxenye-wave kuphela umsakazo insika zomhlaba ngoba amagagasi eside. Empeleni, kusukela kumadivayisi efanayo ayisaxhunyanisiwe ezifakiwe.
Warsaw umsakazo insika wasebenzisa yezokusakaza inkampani isimo. Ngosizo lokhu ukwakhiwa owawusakazwa "Uhlelo lokuqala Polish Radio", noma ngamanye amazwi - "Uhlelo 1 OL". Lokungakahleleki igama lakhe kwakunguKetura - "Ubunye."
Qedela isimanga bonke kwakuwukuthi kwabawayo umsakazo Warsaw insika. Goqa iphutha engxenyeni yokuqala ka-August 1991. Kwathi ngesikhathi esikhundleni omunye guys. isakhiwo Twisted, amashubhu steel babesuke isethi iphuzu, umsakazo izimisele bese kwenzeka phakathi kokubhujiswa kwalo. Ingxenye engenhla uwile eduze phansi, futhi uhhafu ongezansi - kolunye uhlangothi. Le nguqulo isekela ngokuzeleko ekwakheni umakhi-Jan Polak.
Ukuwa ukwakhiwa giant ngaphandle izinto ezizwisa ubuhlungu bayo, izisulu, izisulu kwakungafanele phakathi kwabantu.
Yiziphi izizathu eyehlela Warsaw umsakazo insika? Fall design, ngaphandle kokungabaza, kuwumphumela yephutha eyenziwa abasebenzi lapho backstay esikhundleni. Asizange kuhlangatshezwene kahle nazo zonke izimo ukuqinisekisa ukuphepha ephelele. Ochwepheshe wacabangela lomumo elivunyiwe ukufaka esikhundleni ukuzindela okwanele ukuqinisekisa ukuthi zonke izinto zahamba ngaphandle kwezinkinga.
Esinye isizathu ukuphahlazeka kufanele ngokuthi imiklamo sikhulu kakhulu. Benza kunzima esikhundleni okuphephile besokunxele.
I okunye isiphetho umsakazo insika
Nokho, uhulumeni wase-Polish ngeke give up on the umbhoshongo umsakazo. Akekho wacabanga ukuthi lesi sakhiwo ngeke abuyiselwe liwile. Ngokushesha onjiniyela waphathiswa uhlelo lokutakula, ngaleso sikhathi ngenxa indawo isikhundla lisalele, abantu bakwazi ukuthenga isidlaliso ukudlala "umbhoshongo omude kunayo yonke emhlabeni." Kakade ngo-April 1992, wayezimisele uhlelo lokutakula.
umsebenzi siqu kwi sokubuyiselwa kwaqala ngo-1995. Kodwa-ke endleleni eya umgomo wawa isithiyo, okungekho muntu ngisho ngiphuphe. Futhi alisho ukuthi ngokuya ihogela ukwesekwa noma inkinga yezezimali izimvume. Against ukwakhiwa kwezakhiwo eyenziwe abantu bendawo Konstantinov, etholakala eduze kakhulu. Zazithi emisebeni kubangelwa ekusebenzeni umsakazo insika, zidlangile ku impilo bakule ndawo, ikakhulukazi imbangela ikhanda kanye nezinye izifo. Kwathiwa Kusolakala ukuthi, ngenkathi esiteshini awuzange isebenze kule minyaka embalwa edlule, abantu bendawo bavele waqala ukuzizwa engcono kakhulu. Ngenxa yalokho lezi imibhikisho yokutakula Warsaw umsakazo insika iphrojekthi kwadingeka sivalwe phakade.
Kusukela ngo-August 1991 Warsaw isimo yezokusakaza inkampani wabuya ngenhloso ukusakazela ukusebenza kwe-elidala imitha-335 insika. Yiqiniso, lokhu kakhulu ayisesemikhulu umthamo wayo lobuchwepheshe kanye nokubika komhlaba. Kuze 1995, lapho ayenethemba lokuthi Warsaw umsakazo insika ingabuyiswa. Khona-ke umsakazo kwadingeka bavume ukwamukela ukuthi akusoze kwenzeke.
Beka umsakazo Warsaw Mast kwezihlahla ezinde kunazo zonke phakathi kwezinye izakhiwo emhlabeni
Njengoba kushiwo ngenhla, mayelana 17 eminyakeni (1974 kuya ku-1991) kwaba umsakazo Warsaw Mast isakhiwo ezinde kakhulu emhlabeni, nge ekuphakameni 646,4 amamitha. Kuze 1974, indawo yokuqala phakathi izakhiwo kwezihlahla ezinde kunazo zonke labetibambile teleradiomachta KVLY, elise Blanchard, esifundazweni US of North Dakota. Ukuphakama isakhiwo 628,8 amamitha.
Njengoba ubona, ukuphakama insika Warsaw kwaba esingaphansi nesishiyagalombili amamitha kunalelo, elingenziwanga kakhulu izakhiwo ngezinga elingaka. Leli qiniso kuphakamisa conjecture ukuthi okusezingeni eliphezulu umsakazo insika ePoland elinjalo eyakhelwe, hhayi okungenani ukuze beat KVLY irekhodi. Kulokhu, ukuphakama insika okuye kwabonakala hhayi kuphela ngokudingeka esisebenzayo, njengoba isifiso ize ukuba ngowokuqala. Eqinisweni, njengoba sibonile ngaphambili, ubukhulu Warsaw umsakazo insika, futhi wakhonza njengephayona omunye izizathu nciphisa yayo. Ngakho, njengoba ngaso sonke isikhathi, lo isifiso sokuba nodumo isiholele enhlekeleleni.
Uma uqhathaniswa nezinye izakhiwo ezinkulu, umbhoshongo ezinde kunazo zonke emhlabeni - Ostankino - amamitha angaphezu kuka-100 ngemva ukuphakama Warsaw umsakazo insika futhi kwadingeka ubukhulu 540 m Nokho, ngo-1976 aphakeme TV umbhoshongo kwaba CN Tower, e-Canada. idolobha yaseToronto, nge ekuphakameni 553 metres, kodwa kwaba namanje at 93 metres kunalawo aqinise ensikeni yaso ePoland umsakazo. Kuze kube manje, sakhiwo lesidze kakhulu emhlabeni - Tokyo Skytree, yakhiwa kuleli Japanese dolobha Tokyo ngo-2012, kodwa-ke, kokuba ukuphakama 634 metres, inikeza mayelana 12 metres wazichitha giant Polish.
I namabhilidi eliphezulu kakhulu ngaleso sikhathi - Willis Tower, elakhiwa ngo-Chicago ngo-1973, i-New York-World Trade Center (1973) kanye Empire State Building (1931), ngokulandelana, waba ukuphakama elilingana 443,2 m, 417 m kanye 381 m, okuyinto futhi ingasaphathwa kunaleyo Warsaw umsakazo insika.
Ngemva kokuwa buildings Konstantinovo entendeni phakathi izakhiwo ende kunazo zonke emhlabeni wabuyela KVLY futhi. Kodwa nakhu kwezihlahla ezinde kunazo zonke ekwakhiweni ongagcini insika American ayikwazanga asuse. Kakade kudilizwe Warsaw umsakazo insika labetibambile ukuthi isihloko kuze 2008, lapho idolobha elikhulu kunawo wonke e-United Arab Emirates, Dubai Yakhiwa Burj Khalifa. Lesi sakhiwo has a ukuphakama 828 metres, okungukuthi, ngo-okuningi njengoba 182 amamitha isikhathi eside kunaleso ukuphakama Warsaw wayeyisikhulu giant. Kuze kube namuhla, le Burj Khalifa iyona Isakhiwo esiphakeme kunazo zonke futhi isakhiwo ezake zakhiwa ngumuntu.
izici Jikelele Warsaw umsakazo insika
Ngesinye isikhathi Warsaw umsakazo insika yilona hlaka eliphakeme kunawo wonke emhlabeni (646.4 m). Nokho, mhlawumbe yiso inhloso onjiniyela ngesikhathi kwakhiwa yayo, hhayi umsebenzi esiwusizo sokuba nezinto eziqondile ekuthuthukiseni izinga yezokusakaza kanye ukwandisa endaweni Ukusabalala. Vele yobukhulu enkulu aqinise ensikeni yaso, + kangangokuba lwabangela kuphahlazeka.
Futhi lokho esinazo okuseleyo ezomile? Ukwakhiwa iminyaka engaphezu kweshumi in a ayikho esimweni esihle kanye nesakhiwo isihloko eliphezulu kakhulu lost in 2008 sonke isikhathi. Kakade bambalwa abantu ukukhumbula ngalokhu isakhiwo omkhulu, kodwa esikhathini sakhe uyosikhumbula abantu nakakhulu kuze isakhiwo ngeke kuphela babazisa wabahlinzeki kwezibalo.
Strelets amatutu uPetru I. Yini ehlukanisa strelets amasosha ebuthweni njalo
Induku - Iyini? Ukusetshenziswa ubudlova ezikoleni esidlule
UMbuso Emblem wase-USSR. Maka kanye elingenamikhono izingalo ye-USSR
Funny imishwana: khumbula, xoxa, ukuhleka
The best wezempi isu PC ngo-2013
Uyini umsebenzi eyingozi kakhulu?
Forshmak ngesiHebheru - elula okumnandi